रेवतबहादुरलाई सीतारामको चुनौति,- अब पनि नियामक भनेर सम्मान गरिरहन सक्दिनँ « Clickmandu
रेवतबहादुरलाई सीतारामको चुनौति,- अब पनि नियामक भनेर सम्मान गरिरहन सक्दिनँ
प्रकाशित मिति : १३ पुष २०७३, बुधबार १८:३१
आज तपाईँ लगानीकर्ताहरु जुन माग लिएर नेप्सेको प्राङ्गढमा भेला हुनुभएको छ, ती तपाईँहरुका होइनन्, हाम्रै माग हुन् । हामीले पनि यस्ता माग पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका थियौं । त्यो कुरा आज तपाईँहरुले उठाइरहनु भएको छ । यसमा हामीले अन्यथा लिने भन्ने छैन ।
संयमित हुनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ । हामीले नियमन निकायलाई सम्मान गरेर संयमित भएका थियौं । तर, जब पानीले डुबाउन लागिसक्यो, घाँटीमाथि पानी आइसक्यो । तत्पश्चात हामी बोल्न बाध्य भयौं ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज पुँजी बजार विकासको बाधक छ भनेर विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचारहरु आइरहेका छन् । कतिपयलाई त्यस्तो भ्रम पनि छ । म तपाईँहरुमार्फत् के सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु भने नेप्से पुँजी बजार विकासका लागि सदैब लागिरहेको छ । लाग्न प्रयत्नशील छ ।
तपाईँहरुले अनलाइन सेयर कारोबारको विषय यहाँहरुले उठाउनुभएको छ । त्यो विषयमा हिँजोमात्रै हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजानिक गरिसकेका छौं । संयमित हुनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ । हामीले नियमन निकायलाई सम्मान गरेर संयमित भएका थियौं । तर, जब पानीले डुबाउन लागिसक्यो, घाँटीमाथि पानी आइसक्यो । तत्पश्चात हामी बोल्न बाध्य भयौं ।
नियम बनाउने निकायले नियम नबनाइदिने अनि यो सिस्टम ल्याउ भनेर हामीलाई आदेश दिने ? यो कस्तो खालको प्रवृत्ति हो ? हलो अड्काउने अनि गोरु चुट्ने प्रवृत्ति अहिले हाबी भइरहेको छ । नेप्से काम नगरी बसेको छैन ।
हामीले काम नगरेको होइन । अघिल्लो वर्षको भदौ महिनामा हामीले अनलाइन कारोबारका लागि बोलपत्र प्रकाशित गर्यौं । तर, टेन्डर खोल्न नपाउँदै संसदको सार्वजानिक लेखा समितिमा उजुरी पर्यो । तत्पश्चात हामी रोकिन बाध्य भयौं । र, लेखा समितिले ५ महिना लगाएर क्लियरेन्स दियो । हामीले गत वर्षको फागुन ४ गते हाम्रो भेण्डर कम्पनीसँग हामीले सम्झौता गर्यौं । त्यही दिन हामीले हाम्रो सञ्चालक समितिलगायत धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधिलाई समेत राखेर प्रस्तुति गर्यौं ।
फागुन २८ गते धितोपत्र बोर्डले हामीलाई यो मूल्य बढी भएको आरोप लगाउँदै पत्र पठायो । पत्रको दोस्रो प्याराग्राफमा क्रस बोर्डर कारोबार, क्रस बोर्डर सूचिकरण, अन्तराष्ट्रिय प्रतिूपर्धी सिस्टम, टेस्टेल सिस्टम भनेर भन्ने उल्लेख थियो । तर अघिललो प्याराग्राफमा त्यो नलेउ भन्ने आसय छ । पछिल्लो प्याराग्राफमा तुरुन्तै यस्तो सिस्टम लेउ भन्ने छ । यहाँहरुलाई जानकारी हुनु नै पर्छ के हामी कहाँ क्रसबोर्डर कारोबार र लिस्टिङका लागि हामीसँग नियमहरु पर्याप्त छन् ? नियम बनाउने निकायले नियम नबनाइदिने अनि यो सिस्टम ल्याउ भनेर हामीलाई आदेश दिने ? यो कस्तो खालको प्रवृत्ति हो ? हलो अड्काउने अनि गोरु चुट्ने प्रवृत्ति अहिले हाबी भइरहेको छ । नेप्से काम नगरी बसेको छैन । म तपाईँहरुसँग आज मात्रै होइन, जहिल्यै पनि यसैगरी उभिएर बाल्न तयार छु । हामीले गरेका यथार्थ कुराहरु तपाईँहरुको अगाडि राख्न तयार छु ।
नेप्सेको महाप्रवन्धको हैसियतले पदको गरिमा राखेर नियमन निकायलाई गर्नुपर्ने सम्मानलाई कायम राखेर म नबोलेको मात्रै हो । तर, अहिलेको स्थिति भनेको तपाई लगानीकर्ताहरुले प्लेकार्ड बोकेर हाम्रो अगाडि आइसकेपछि हामी बोल्नै पर्छ ।
जहाँसम्म वाणिज्य बैंकलाई सेयर ब्रोकर लायसन्स दिने कुरा छ, त्यसमा पनि हामी बाधक छौं भनेर समाचारहरु आइरहेका छन् । हामी प्रष्ट पार्न चाहन्छौं कि हामी बाधक छैनौं । यदि हामी बाधक हुन्थ्यौं भने हाम्रो सञ्चालक समितिले यसलाई रोक्न चाहन्थ्यो भने साना लगानीकर्ता संघका पनि प्रतिनिधिलाई समाबेस गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, राष्ट बैंकको एकीकृत निर्देशन त्यो हेरेर कहाँ कहाँ समस्या छन् ? त्यसको एकीकृतरुपमा समाधान गर्न सोचौं भनेर हमी भन्दैनथ्यौं । हामीले प्रतिवेदन भोलिसम्ममा सञ्चालक समितिमा आइसक्नुपर्छ भनेका छौं । हामी त्यसरी जतिसक्दो छिटो कामहरु गरिहरका छौं ।
हामीले मौन बसेर व्यावसायिक तरवमा आफ्ना कामहरु गरिरहँदा केहीले हाम्रो संयमतालाई, केहीले हाम्रो धैउर्तालाई कमजोरी ठानेका छन् । म तिनीहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने त्यस्तो नठानियोस् । बोल्न हामीलाई पनि आउँछ । जवाफ दिन हामीलाई पनि आउँछ । र, अब हामीले काम गरेका कुराहरु यथार्थरुपमा राख्न थाल्छौं । म के निवेदन गर्न चाहन्छु नेप्सेको महाप्रवन्धको हैसियतले पदको गरिमा राखेर नियमन निकायलाई गर्नुपर्ने सम्मानलाई कायम राखेर म नबोलेको मात्रै हो । तर, अहिलेको स्थिति भनेको तपाई लगानीकर्ताहरुले प्लेकार्ड बोकेर हाम्रो अगाडि आइसकेपछि हामी बोल्नै पर्छ । यतिखेर हामी नबोलिरहन सकेनौं । हामीले यथार्थ कुरामात्रै राखेका हौं । कुनै अन्यथा कुरा राखेका छैनौं ।
धितोपत्र बोर्डबाट निर्देशन एउटा निर्देशन आयो ब्रोकरका शाखा विस्तार गर्नेजस्तो संवेदनशील विषयमा नीतिगन निर्णय गर्नुभन्दा पहिला धितोपत्र बोर्डको सहमति लिन भन्दै पत्र लेखियो । त्यसकारणले गर्दा हामीले ब्रोकरलाई उपत्यका बाहिर विस्तार गर्न नसकेका हौं ।
ब्रोकरलाई शाखा विस्तार गर्ने विषयमा मंगलबारकै सञ्चालक समितिको बैठकबाट ब्रोकर एसोसिएसनलाई पनि तपाईँहरु कहाँ कहाँ जानुहुन्छ सहमति गरेर आउनोस् भनेर एसोसिएसनसँग सहमतिसहितको हामीले शाखा विस्तारका लागि धितोपत्र बोर्ड पठाइसकेका छौं ।
म यहाँहरुलाई अर्को कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । नेप्सेको सञ्चालक समितिले पनि ब्रोकरको शाखा विस्तरको विषयलाई नेप्सेको व्यवस्थापनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । तर जब अघिल्लो वर्ष पुस मसान्तमा जब हाम्रो वार्षिक उत्सवको कार्याक्रम थियो त्यतिखेर मैले अब ब्रोकरलाई हरेक शहरमा पुर्याउने भनेर घोषणा गरेको थिएँ । तत्पश्चात धितोपत्र बोर्डबाट निर्देशन एउटा निर्देशन आयो ब्रोकरका शाखा विस्तार गर्नेजस्तो संवेदनशील विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नुभन्दा पहिला धितोपत्र बोर्डको सहमित लिन भन्दै पत्र लेखियो । त्यसकारणले गर्दा हामीले ब्रोकरलाई उपत्यका बाहिर विस्तार गर्न नसकेका हौं । अहिले हामीले स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पठाएका छौं, त्यहँबाट अनुमति पाउनेवित्तिकै ब्रोकरलाई मोफसलमा शाखा विस्तार गर्न दिइने छ । म यो विश्वस्त गराउन चाहन्छु ।
हामीले ब्रोकर नथप्ने भनेका छैनौं, वाणिज्य बैंकलार्इै ब्रोकर लाइसन्स नदिने भनेका छैनौं । मात्रै के हो भने एउटै प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि कुन निकायले के काम गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट होस भनेर हामीले थप अध्ययन गराएका हौं । नेप्सेको प्रांगढसम्म आएर हाम्रै मागहरुलाई यहाँहरुले कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुभएको छ । हाम्रा कामहरु एकै प्रकाहरका हुन् यसलाई समर्थन हुनेगरी, बलपुग्ने गरी यहाँहरुले सकरात्मक विचार राखिदिनु भएकोमा यहाँहरुप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको कार्यालय घेराउ गर्न आएका नेपाल इन्भेष्टर फोरमका प्रतिनिधिहरुलाई थपलियाले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश